Astaanta shirkadda - Genzon
Qalabka Genzon Novel
Waxaa la aasaasay 2017, Shuyang Genzen Novel Materials Co., Ltd. (halkan waxaa loogu magac daray "GENZON Novel Materials") waxay hoos timaadaa gacanta GENZON GROUP kaas oo sidoo kale mas'uul ka ah maamulkiisa iyo socodsiintiisa.
Kooxda Maalgashiga ee Genzon
Kooxda Genzon Investment Group Co., Ltd (the “Genzon”) waxaa la aasaasay Diisambar 2003. Iyadoo xarunteeda ay ku taal Shenzhen, Genzon waxay leedahay in kabadan 5,000 oo shaqaale ah dalka oo dhan. Ku meelaynta adeeg bixiyaha ee warshadaha teknolojiyada sare, Genzon badiyaa wuxuu ku lug leeyahay maalgashiga warshadaha, horumarinta dhismaha warshadaha, dhismaha iyo hawlgalinta xarumo warshadeed, iyo ganacsiyada kale.
Iyada oo la ixtiraamayo maalgashiga warshadaha, Genzon wuxuu horumariyaa dawooyinka, dawooyinka cusub iyo waxsoosaarka birta oo leh mabda 'horumarineed oo qoondaynta kheyraadka ku saleysan suuqa. Taas oo, Welmetal ay ka go'antahay soo saarista iyo R&D ee alaabada birta ah, halka Genzon New Materials ay diiradda saareyso duurka qalabka polymeric-ka. Waxaa sidoo kale jira mashruucyo maalgashi oo fara badan oo ganacsi oo laga heli karo shirkadda loo yaqaan 'Genzon' oo ay ku taallo faylalka. Iyada oo la ixtiraamayo dhismaha iyo howlgelinta xarumo warshadeed, Genzon waxay isku uruurisaa meheradahooda ku yaal Greater Bay Area, oo hadda iska leh waxayna ku shaqeeyaan dhowr xarumo warshadeed.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, Genzon wuxuu u hoggaansamayaa himilada abuurista deegaanka dabiiciga ah wuxuuna u hibeeyay inuu noqdo shirkad bartilmaameed aamin ah. Si looga faa iidaysto fursadaha xilli isbeddello waaweyn iyo dib-u-habeyn dhaqaale ee Shiinaha, Genzon wuxuu, sida had iyo jeer, u kobcin doonaa una adeegi doonaa warshado qiimo-sare ku jira oo taageeri doona horumarinta warshadaha iyada oo loo marayo xafiisyadeeda cajiibka ah iyo adeegyada adeegyada guud ee adeegyada. Kooxda 'Genzon Group' waxay horumarin ku sameeyeen boodhadh ay leeyihiin baarkinka warshadaha iyo dadka deegaanka Sanado badan, waxay horumarisay dhismaha ganacsiga, dhismayaasha xafiisyada, dadka degan, hoteelka iyo naadiga golf, waxayna kasbatay faa iidooyin iyo khibrado horumarineed ee warshadaha iyo maaraynta hantida.
Kooxda R&D ee asaasiga ah, oo uu hogaaminayo dhakhtar wax ku soo bartay America, waxay ku yaalliin Dooxada Silicon Valley si ay u dhisaan teknoolojiyadda horseed u ah adduunka.
Heerka tijaabada filimka beeraha ee heerka sare ah waxay ka caawineysaa hal abuurka isku-dhafan ee wax soo saarka, daraasadda iyo cilmi baarista
Teknolojiyadda polyester-ka ee sharaf-jabka ah, ee adduun-weynaha loogu talagalay hanti aqooneed madax-bannaan iyo tikniyolojiyad la madax-bannaan oo leh oggolaanshaha 15 gobol oo ay ku jiraan Shiinaha, Mareykanka, Yurub, Japan iyo Taiwan
Ansixinta mashruuca natiijooyinka cilmi-baarista ganacsiga ee Gobolka Jiangsu sanadkii 2014
Abaalmarinta 2-aad ee finalka tartankii Seddexaad ee Snooniisnimada iyo Tartanka Ganacsiga - Warshadaha Waxyaabaha Novel ee 2014